काठमाडौं । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई दिउँसो (मध्यान्ह १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म) बाहिर घाममा काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।
यदी कुनै कम्पनी वा रोजगारदाताले नियमको अवज्ञा गरेर कुनै कामदारलाई आगामी तीन महिनाको अवधिमा मध्यान्ह १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बाहिर घाममा काम गर्न लगायो वा काम गर्न बाध्य पार्यो भने श्रम मन्त्रालयको टोल फ्री नं. १९९११ मा सम्पर्क गरेर उजुरी गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
रोजगारका लागि साउदी अरब जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगीनबाट जोगिन यी कुरामा ध्यान दिनुहोला
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरब गएकाहरु ठगीनेक्रम बढेपछि रियादमा रहेको नेपाली दूतावासले साउदी आउन चाहने नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबमा आएका कतिपय
काठमाडौं । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई दिउँसो (मध्यान्ह १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म) बाहिर घाममा काम नगर्न आग्रह गरेको छ । दूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साउदी
साउदी अरबका राजा र युवराजसँग टर्कीका राष्ट्रपतिको भेटवार्ता
रियाद । साउदी अरबका राजा र युवराजसँग टर्कीका राष्ट्रपतिले शुक्रबार भेटवार्ता गरेका छन् । राजा सलमान विन अब्दुलाजिज अल साउद र युवराज मोहम्मद विन सलमानसँग टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले साउदी
जापान र साउदी अरब विश्वकपमा छनोट
काठमाडौं । दुई एसियन टोली जापान र साउदी अरेबियाले विश्वकपमा आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । विश्वकपको एसियन छनोटअन्तर्गत बिहीबार भएको अन्तिम चरणको खेलमा जापानले अस्ट्रेलियालाई २–० ले पराजित गरेसँगै समूह ए